Soo-saareyaasha Masarka / Qamadiga / Bariiska Soosaarayaasha iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha / Qamadiga / Bariiska Goosta
Is-Gawaarida Qamadiga Isku Mashiinka Goosta
Faahfaahinta Waxsoosaarka 4LZ-7 / 4LZ-8 goos goos goos goos goos goos ah oo goos goos ah ayaa inta badan loo isticmaalaa goynta qamadiga, sidoo kale waa la goosan karaa bariiska. Mashiinka ayaa hal waqti ku dhammayn kara goynta, tumaadda, kala-goynta, nadiifinta iyo howlaha kale. Mashiinka wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta, hawlgal ku habboon, hawlgal dabacsan, waxtar sarreeya iyo lacag degdeg ah oo lagu kasbado. Mashiinka Faahfaahinta Farsamaynta Awoodda iswaafajinta kw 110 Guud ahaan Cabbirka (L * W * H) mm 6740 * 2940 * 3380 Wadarta culeyska kg 5640 ...
Faahfaahinta alaabta Mashiinka goosashada galleyda iswada ee 4YZ-4B / 3B waa nooc ka mid ah mashiinka goynta galleyda iyadoo lagu saleynayo nuugista tiknoolajiyadda horumarsan ee gudaha iyo dibaddaba ee goos gooska dhegta galleyda Mashiinka ayaa ugub ku ah naqshadeynta, wuuna dhameystiri karaa howlaha oo dhan marka laga soo qaadayo galleyda, gaarsiinta, xoqidda, iyo xirxirashada ilaa goynta cawska iyo dib u warshadeynta markiiba. Waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa in lagu goosto dhegaha hadhuudhka. Qaabka Faahfaahinta Farsamada 4YZ-4B Wax soosaarka ...